Minecraft Trial 1.12.0.28 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 1.12.0.28 လြန္ခဲ့ေသာ3ရက္က
ဂိမ္းမ်ား အေႂကြေစ့ထည့္ ကစားရေသာ ဂိမ္းခံု Minecraft Trial
Minecraft Trial ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
Minecraft သင်ယူချင်သောအရာကိုစွန့်စားမှုဆုံးဖြတ်ရှိရာတစ်ဦးဖွင့်ဂိမ်းဖြစ်ပါတယ်။ * အဆုံးမဲ့ကမ္ဘာ Explore နှင့်နေအိမ်များ၏အရိုးရှင်းဆုံးအနေဖြင့်ရဲတိုက်၏ကွီးမားဆုံးမှအရာအားလုံးကိုတည်ဆောက်။ ဒီအခမဲ့, အချိန်ကန့်သတ်ရုံးတင်စစ်ဆေးခုနှစ်တွင်သင်အန္တရာယ်ရှိတဲ့လူအုပ်ကိုချွတ်ကာမိမိဘာသာအားကိုးလက်နက်နှင့်သံချပ်ကာကျွမ်းကျင်စွာဘယ်မှာရှင်သန်ရပ်တည်ရေး mode ကိုအတွက် Minecraft တွေ့ကြုံခံစားရလိမ့်မယ်။ Create, စူးစမ်းခြင်းနှင့်ရှင်သန်!
ဖန်တီးမှု mode ကို, multiplayer နှင့်ပိုပြီးအပါအဝင် - - အပြည့်အဝ Minecraft အတွေ့အကြုံကိုခံစားရန်သင့်ရဲ့စမ်းသပ်ကာလအတွင်းသို့မဟုတ်အပြီးတွင်မည်သည့်အချက်မှာဂိမ်းဝယ်ယူရန်။
Minecraft Trial အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
Minecraft Trial အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
Minecraft Trial အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
Minecraft Trial အား အခ်က္ျပပါ
လိုင္စင္ လိုအပ္သည္ 9
beratstoreturjish စတိုး619.4k
Minecraft Trial ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း Minecraft Trial အခ်က္အလက္
APK ဗားရွင္း 1.12.0.28
ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒ https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement
File Size: 93.14MB
Release date: 2019-08-17 15:39:52
လက်မှတ် SHA1: 3F:B4:35:08:27:4B:FD:6B:DD:15:FC:42:57:19:CB:E3:40:AE:13:D8
ထုတ်လုပ်သူ (CN): Mojang AB
အဖွဲ့အစည်း (O): Mojang AB
ပြည်နယ်/မြို့တော် (ST): Stockholms L?n
Minecraft Trial APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ